खसी किन्दै हुनुहुन्छ ? मासु बिग्रेला नि !
दशैँ मुखैमा आइपुगेको छ । मासुका चौरासी व्यञ्जनसहितका अन्य परिकार तयार गरी घरपरिवारमा रमाइलो गरेर खानेमात्रै नभई, इष्टमित्र, माइती, ससुरालीखलकमा कोसेली बाँडेर रमाइलो गरी मनाउनु पनि हो । हुन त बढ्दो सहरीकरण अनि विद्युतीय सञ्जालको प्रभावका कारण आजका हाम्रा छोराछोरी पुस्ता पश्चिमी सभ्यतामा अभ्यस्त भइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दरबारमार्गमा खुलेका केएफसी पसलले काठमाडौँका टोलटोलमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेका...